Manginy fotsiny ny aretin’ny voa izay tena atahoran’ny olona tokoa. Mahatratra 250.000 Ar mantsy raha kely ny manao dialyse indray mandeha ho an’ny olona marary voa iray izay tsy maintsy hatao in-telo isan-kerinandro raha te ho velona. Fanoloana ilay ra tsentsin’ny menaka sy ny siramamy no hatao amin’izany mba hahafahan’ireo voa roa miasa ara-dalàna toy ny teo aloha indray. Betsaka ireo olona tonga nidodododo nitily maimaimpoana ny tahan’ny siramamy tao anatin’ny vatany nanomboka omaly alakamisy. Anisan’ireny ny teny amin’ny Centre médical Marie Stella Analamahitsy izay marihina fa manatanteraka fitiliana sy fizaham-pahasalamana maimaimpoana hatramin’ny faran’ny taona. Lohahevitra noraisin’ny OMS tamin’ity taona ity hoenti-miady amin’ny diabeta moa ny fampandraisana anjara ny fianakaviana ka anisan’ireny ny fahaizana manabe ny ankizy mba hahay hisakafo ara-pahasalamana sy hitaiza vatana hisorohana ny aretina.